Wakaalada Wararka Warqaad
Wareegta uu soo saaray madaxweynuhu oo dhaqan qashay. December 9, 2013 5:57 pm
DHAGEYSO : Wararkii udambeeyey Duhur ee Somaliya
XOG CULUS: “Ileen Alshabaab Kaliya wax ma dilaan”
Mudane Axmed Fiqi oo soo bandhigay Su’aal la yaab leh? Ka jawaab
Jarmalka & Masar oo Safiiro cusub u soo magaacabay Somaliya‏ (SAWIRO)
Khaliijka Carabta oo shir dhaqaale uruurin uqabanaya Somaliya (SAWIRO)
DHAGEYSO : Qaabkii uu udhacay Xukunkii maanta Maxkamada G.Banaadir
DEG DEG : Xukun lagu riday malkiilaha Shabelle,Max’ed Bashiir & Faadumo C/qaadir
Dhageyso Madaxweynaha oo qiray in ay ay jirto Cadaalad darro!!!
Mudane Farmaajo la filayo inuu Muqdisho soo gaaro, Sabab?
Dhageyso: Fanaaninta Ikraan Caraale iyo Falis Waayaha cusub waa walaalo !
Dhageyso: Dagaal ka dhex jira Maamulka JUBBA & kan baydhabo lagu dhisayo
Ra’iisalwasaaraha Yahuuda oo diiday ka qeyb galka Aaska Mandela SABAB
Dhageyso: Qarax ka dhacay Afgooye oo dhimasho & dhaawac geystay
Website-ka Warbixiye.com oo hawada soo galay iyo Warar Cusub
DAAWO: Wareysi si xun loogu gefay shaqsiyada Madaxweynaha Somalia
War la’aanta Islii iyo weerarka tuugada (maqaal)
DHAGEYSO : Al Shabaab oo la ogaaday inay lacago baad ah qaataan
DHAGEYSO : Wararkii udambeeyey Subax ee Somaliya
Daawo Sawirada : C/weli gaas oo kormeeray Jaamacadaha Boosaaso
Daawo Video : 23 wiil oo lagu guday laakiin geeriyooday
Warar Dheeraad ah → Wararka Maanta
Mudane Axmed Fiqi oo soo bandhigay Su’aal la yaab leh? Ka jawaabJarmalka & Masar oo Safiiro cusub u soo magaacabay Somaliya‏ (SAWIRO)Khaliijka Carabta oo shir dhaqaale uruurin uqabanaya Somaliya (SAWIRO)
DHAGEYSO: Sarkaal jooga Garbahaarey oo ka warramay dagaalkii shalay
DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay!
Tufaaxa iyo xanjadda oo la sheegay inay ilkaha cadeeyaan
Xildhibaan Muuse Sheekh “Waxaan u taaganahay xilka RW xukuumada”Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay?DAAWO: Taleex oo haawaneysa iyo dadkii oo weli ku laaban – Rasaas daadsan.
Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay?
DAAWO: Nimco Dareen oo soo qaaday hees dareen badan leh
UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar
Fanaanada Sahro Ileeye oo ku geeriyootay Dalka Ethiopia.Dhageyso Gabay Qosol Badan oo isugu Jira Afcarabi iyo SoomaaliFarxiya Fiska oo Wacdaro Muujisay Hees cusub oo ay Qaaday Ciidul Fidriga “Daawo”
Tooshka WarqaadXOG CULUS: “Ileen Alshabaab Kaliya wax ma dilaan” Mudane Axmed Fiqi oo soo bandhigay Su’aal la yaab leh? Ka jawaab Dhageyso Madaxweynaha oo qiray in ay ay jirto Cadaalad darro!!! Mudane Farmaajo la filayo inuu Muqdisho soo gaaro, Sabab? Tooshka Warqaad: Xildhibaan Feysal maxaa loo dilay? Danta dalka iska daa! XOG RASMI AH: Ra’iisul wasaaraha waa nin ceynkee ah? xaqiiq dhab ah DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay! Arimaha BulshadaDHAGEYSO: Sarkaal jooga Garbahaarey oo ka warramay dagaalkii shalay DAAWO: Xuska maalinta Qowmiyadaha Itoobiya oo si weyn loo xusay! Tufaaxa iyo xanjadda oo la sheegay inay ilkaha cadeeyaan Xildhibaan Muuse Sheekh “Waxaan u taaganahay xilka RW xukuumada” Sideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? DAAWO: Taleex oo haawaneysa iyo dadkii oo weli ku laaban – Rasaas daadsan. Nin Soomaali ah oo lagu qabtay isagoo kufsanaya gabar meyd ah Daawo: Musharrixiin cambaareysay qaraxii ka dhacay Boosaaso. DEG-DEG: Hoggaamiyihii geesiga ahaa ee Mandalle oo geeriyooday! DHAGEYSO: Saraakiisha Amniga Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda amni visitor activity monitoring
MaqaaloSideed ku Cafin Laheyd Saaxiibtaa ama Saaxiibkaa Qalad kaa Galay? Somaliya Shilinkaa Sharciga Ka Weyn!!!+Faallo Soomaaliya ma soomaali baa leh misa Zamankiyo wuxuu sido? Wasaarada horumarinta & A/Bulshada : Hogaanka Wasaaradaha Soomaaliya. Dilalka Madaxda Al Shabaab yaa ka dambeeya? Culeys dhig ee mid kale Qaad waa cilad heysata dowlada Soomaaliya. Puntland kana siib kana saar ( Riwaayad taxane ah Qaybtii 1-aad ) Madaxweyne Xasan oo hadal qiiro leh U Sheegey Shacabka Jubooyinka Fanaanad Soomaaliyeed oo ka Tilaab satay Dhaqankena Wanagsan + Sawiro Halkee Ku Tababarteen Kooxdii ka danbeeysay Weerarkii Westgate Sheeko gaaban oo Shakiga iyo isku dirka Soomaalida ka hadleysa UNICEF oo barnaamij wada sheekeysi ah u furtay gabdho Soomaaliyeed oo da’yar Madaxweynaha oo Diraya Hambalyo ku Aadan 59 guuradii ka soo Wareegatay Calan Soomaaliyeed #22306 (no title)Nagala Soo Xariirtaleex banaabaxgacan iyo lug go’andhalinmuuqaalSoomaalilayaabka baaluunkaDaawo Muuqaalka xayawaan dagaalamaya iyo kumanaan dad ah oo daawanayaAxmed MadoobeGaafowQARAXDaawo Video : Hodan C/raxman oo Qurbo joogta Muqdisho hees cajiib ah ku ceebeysay!!!Shaaribaha iyo BakistankufsikubadTarsanSaado-CaliFAYSAL-WARAABE-DHEGAYSOBEEGSIGASh UmulProf ToganeCali Maxamed GeedifoolkaanomudaaharaadthanksgivingXasuuqBAARLAMAANKAgooltuugAbu MuscabmuuqaalGUBASHOMuuqaal: Qarixii maanta ee halakeeyay BoosaasogabarMandellarugcadaa dagaalUMALmuuqaalMusharax Muuse Sh Cumarma dhabaa?